ताप्लेजुङ जिल्ला समन्वय समितिमा एमाले प्यानलै विजयी
न्यूजलय शुक्रबार २०, साउन २०७४
ताप्लेजुङ । जिल्ला समन्वय समिति ताप्लेजुङमा एमालेको प्यानल विजयी भएको छ । बिहीबार भएको जिल्ला समन्वय समितिको चुनावमा एमालेका तर्फबाट अध्यक्षको उम्मेदवार घनेन्द्र मादेनसहित एमाले पुरै प्यानल विजयी भएको हो ।
अध्यक्षका उम्मेदवार मादेनले १२ मत प्राप्त गर्दा उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका तर्फबाट अध्यक्षका....
इटहरीमा पैनी मिचेका संरचनाहरु भत्काउन सुरु
इटहरी । वर्षेनी वर्षाको समयमा इटहरीमा डुवान भएको भन्दै उपमहानगरपालिकाले बिहिबारदेखि सार्वजनिक स्थानमा बनाएका भौतिक संरचनाहरु भत्काउन शुरु गरेको छ ।
स्थानिय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेको तर्फबाट नगर प्रमुखमा विजय भएलगतै द्वारिकलाल चौधरीले नगर भित्र डोजर कुदाउने घोषणा गरेका थिए । बिहिबार नगरपालिकाले वाड....
निलम्बनबाट जोगिएका डीएसपी शर्माको बढुवा होला त ?
इटहरी । निलम्बनमा परेका पूर्व क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीमा कार्यरत डीएसपी सञ्जीव शर्मा दासको निलम्बन रोकिएको छ । निलम्बनको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले गत साउन १५ गते नै आदेश दिएको छ ।
निलम्बनपछि डीएसपी दासले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।....
सुनसरी, मोरंग र झापाका नयाँ एसपी यी हुन्
सुनसरी । देशभरका विभिन्न प्रहरी प्रमुखहरुको सरुवा भएको छ । यसअनुसार सुनसरी प्रहरी प्रमुख एसपी पोषराज पोखरेल सरुवा भएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग केन्द्रीय कार्यालय प्रहरी महाशाखा टंगाल जाने भएका छन् । उनको ठाँउमा एसपी विद्यानन्द माझी आउने भएका छन । उनी यसअघि पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय....
विराटनगरका मेयर भन्छन्, ‘चौतर्फी विकासमा निरन्तर प्रयासरत छु’
विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले नैतिकता र इमान्दारिताको जगमा टेकेर नगरक्षेत्रको विकास निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिने बताएका छन् । बसपार्क टोल विकास संस्थाले मंगलबार विराटनगरमा आयोजना गरेको बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा मेयर पराजुलीले नगरक्षेत्रको भौतिक पूर्वाधारसहित चौतर्फी विकासका लागि आफू निरन्तर प्रयासरत रहेको....
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले माग्यो नौ जना कर्मचारी
विराटनगर । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र संकायले करार सेवामा पदपूर्तिका लागि आवेदन माग गरेको छ । सोमबार एक विज्ञापन प्रकाशित गरी ८ उपप्राध्यापक र १ सह—प्राध्यापकसहित विभिन्न विषयमा ९ जना उपप्राध्यापक माग गरेको हो ।
विश्वविद्यालयले कम्युनिटी हेल्थ नर्सिङतर्फ २ जना, मिडवाइफेरि नर्सिङतर्फ २ जना,....
निजी स्कुलमा पुगेर मेयरले लालपूर्जा मागेपछि ...
इटहरी । इटहरीको बुढी खोला किनारमा इटहरीकै सबैभन्दा ठूलो मैदानसहितको स्कुल बन्दै गर्दा इटहरीवासीले अचम्म मानेका थिए । उक्त स्कुल थियो डीभीएम ग्लोबल स्कुल । ऐलानी जग्गा हडपेर स्कुल बनेको चर्चासमेत चल्यो ।
सरकारी विद्यालय भए त त्यती फरक पर्दैनथ्यो, तर दयानन्द वैदिक मिसनअन्तर्गतको....
इटहरीमा दिन दहाडै पुलमुनी बलात्कार, भारतीय पक्राउ
इटहरी । इटहरीको तरहरास्थित कृषि केन्द्रमा काम गर्दै आएका एक भारतीयलाई बलात्कारको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
इटहरी १७ विसनपुरकी १७ वर्षिया किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा बिहार घर भएका २८ वर्षका मोहम्मद बबुबान पक्राउ परेका हुन् । उनी विगत केही महिनायता कृषि केन्द्रमा....
जनता बहुमुखी क्याम्पसमा राप्रवीसको तालाबन्दी
इटहरी । राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठनले पटकपटक रुपमा राखेको मागलाई बेवास्ता गरेको भन्दै क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेको छ । पटकपटक रुपमा औपचारिक र अनौपचारिक ढंगले मागराखी मागपत्र पेशगर्दा र बिज्ञप्ती समेत निकाल्दा क्याम्पस प्रशासनले बेवास्ता गरेपछी तालाबन्दी गर्न बाध्य भएको राप्रविस जनता बहुमुखीका सह....
कहाँ पुग्यो बीपी प्रतिष्ठान भ्रष्टाचारको अनुसन्धान ?
इटहरी । केही दिन अघि मात्र धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्षेत्रीय कार्यालयले छापा मार्यो । जँहाबाट आवश्यक कागजातहरु नियन्त्रणमा लियो । शुक्रबार नियन्त्रणमा लिइएको सो कागजपत्र आज सम्म पाँच दिन बितिसकेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरीले सो....